ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » အသင်းအဖွဲ့သတင်းများ » SKAL သည် ကမ္ဘာ့သမ္မတသစ်တစ်ဦးကို ရွေးချယ်ရန်- ဤစိန်ခေါ်မှုကို ဆင်နွှဲရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သော တူရကီ-အမေရိကန်လူမျိုး Burcin Turkkan နှင့် တွေ့ဆုံပါ
အသင်းအဖွဲ့သတင်းများ • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • အစည်းအဝေးတွေ • သတင်း • လူပုဂၢဳိလ္မ်ား • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ယခုခေတ်စား • USA မှ Breaking News • ဗီဒီယို
Burcin Turkkan၊ SKAL Orlando ခရစ်စမတ်ပါတီတွင် ကမ္ဘာ့သမ္မတလောင်း
SKAL သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားပညာရှင်များအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းအတွက် မြင့်မားသောအဆင့်တင်ပြမှုများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလည်း အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘောက်ထော်က ကမ္ဘာ့သမ္မတနဲ့ ရပ်သွားတယ်။ eTurboNews Burcin Turkkan သည် ဤအလုပ်အတွက် တစ်ဦးတည်းသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
SKAL သည် သူငယ်ချင်းများကြားတွင် စီးပွားရေးလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒီသူငယ်ချင်းတွေက ကမ္ဘာတဝှမ်းက နိုင်ငံပေါင်း 102 မှာ ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်/တူရကီ go-getter သည် ဒီဇင်ဘာ 55 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် virtual SKAL အထွေထွေညီလာခံတွင် လိုအပ်သော 10% အတည်ပြုမဲများကို ရယူရန် ကြိုးစားနေပါသည်။
Burcin Turkkan သည် SKAL USA ၏ ယခင်သမ္မတဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏နောက်ထပ်ကမ္ဘာ့ဥက္ကဌဖြစ်လာရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
1934 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Skål International သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ တစ်ခုတည်းသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံး ပေါင်းစည်းပြီး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊
၎င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ဤခရီးစဉ်များတွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် ကောင်းမွန်သော နိုင်ငံတကာ မိတ်သဟာရများကြောင့် လှုံ့ဆော်ခံရသော Jules Mohr၊ Florimond Volckaert၊ Hugo Kafft၊ Pierre Soulié နှင့် Georges Ithier ဦးဆောင်သော ပညာရှင်အုပ်စုကြီးသည် ပါရီတွင် Skål Club ကို ဒီဇင်ဘာ 16 ရက်၊ 1932 ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူများအကြား နိုင်ငံတကာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု အယူအဆ ကြီးထွားလာပြီး ၁၉၃၄ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် နိုင်ငံငါးနိုင်ငံတွင် ကလပ်အသင်း ၁၂ ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ခရီးသွားနှင့် ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍများတွင် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ Clubs များအားလုံးကို စုစည်းပေးသည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့တစ်ခု ဖန်တီးရန် စိတ်ကူးပေါ်လာခဲ့သည်။
'Association Internationale des Skål Clubs' (AISC) ကို ၁၉၃၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပဲရစ်မြို့ရှိ Hotel Scribe တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကိုယ်စားလှယ် ၂၁ ဦး၊ ကလပ်အသင်း ၁၁ သင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လန်ဒန်မှ လေ့လာသူ နှစ်ဦးတို့ စုပေါင်းပြီး အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ ပါဝင်သည့် အထွေထွေညီလာခံတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၊ Florimond Volckaert ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အောက်တွင်-
ဒီနေ့ထက်ပိုပြီး အသင်းဝင် ၁၅,၀၅၃နယ်ပယ်အသီးသီးမှ မန်နေဂျာများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများ ခေါ်ယူ၍ ပြည်တွင်း၊ အမျိုးသား၊ ဒေသဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များထက် တစ်လျှောက်လုံး မိတ်ဆွေများအကြား စီးပွားရေးလုပ်ရန်၊ 318 Skålကလပ်.
Skål International ၏ အခြေခံယူနစ်မှာ Club ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် Club ၏ ပထဝီဝင်နယ်နိမိတ်အတွင်း Skål International လှုပ်ရှားမှုများတွင် ဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
ယနေ့တွင် eTurboNews Breaking News Show သည် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် SKAL Orlando ကလပ်နှင့် SKAL ခရစ္စမတ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ Burcin Turkkan တွင် တက်ရောက်နေပါသည်။ ။
Burcin Turkkan ကပြောပါတယ်
သင်၏ဒါရိုက်တာနှင့်အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ် Skål International အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင် လွန်ခဲ့သော2နှစ်က တာဝန်ထမ်းရန် ကျွန်ုပ်၏အခွင့်ထူးဖြစ်သည်။ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်၊ 2021 ခုနှစ် မနက်5နာရီ CET မှာကျင်းပမယ့် SI AGA မှာ ငါမင်းရဲ့နောက်ထပ် Skal International World President ဖြစ်ဖို့ အရွေးခံရတာပါ။ မင်းရဲ့ အပြည့်အ၀ ထောက်ခံမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုကို ငါ အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင်နေပြီး မင်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှာ အမြဲရှိနေမှာပါ။ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့် Skal ။
6:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 09, 33
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂ်လေး ဖတ်ရတာ နှစ်သက်ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ဖတ်ရကျိုးနပ်မယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို သင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ရအောင် ဖန်တီးပေးမယ့် လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ် !!
6:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 04, 54
Skal ကို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Skype သို့မဟုတ် Zoom မှတဆင့် သင့်အား တွေ့ဆုံလိုပါသည်။
CETINAY AKSOY says:
5:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 15, 58
ကျွန်ုပ်သည် Izmir/Turkey SKAL အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ပြဌာန်းချက်များအရ တဦးတည်းသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Burçin TÜRKKAN ကို အဘယ်ကြောင့် မရွေးချယ်သင့်ပေ။ ငါသူမကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ထောက်ခံတယ်။
5:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 09, 09
ဒါကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုချင်ပါတယ်။ Skål International ဥက္ကဋ္ဌ။ အမှုဆောင်ကော်မတီတွင်ထိုင်သော ကောင်စီ၊ Bernard Whewell ၊ နောက်ဆုံးအစီအစဉ် ICS Search မှ လက်ငင်းဝင်ရောက်သုံးနိုင်သော ဝေါဟာရ ဝဘ်ဆိုဒ်အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပြီး continence ဝေါဟာရများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ကြည့်ရှုပါ။